2 Samuweli 15 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
15 Kwathi ke emva kwezo zinto uAbhisalom wazenzela inqwelo, inamahashe namadoda angamashumi amahlanu abaleka phambi kwakhe.+ 2 Wavuka ke ekuseni+ uAbhisalom waza wema ecaleni kwendlela eya esangweni.+ Bekuthi ke, xa nayiphi na indoda ithe yanetyala eliziswa kukumkani ukuze agwebe,+ andule ke uAbhisalom ayibize aze athi: “Uvela kwesiphi na isixeko?” ize yona ithi: “Umkhonzi wakho uvela kwesinye sezizwe zakwaSirayeli.” 3 Ubeye athi ke uAbhisalom kuyo: “Yabona, imibandela le yakho ilungile yaye ithe tye; kodwa akukho bani uyichophelayo kwakumkani.”+ 4 Aze uAbhisalom ahlabele mgama athi: “Owu ukuba nje bendimiselwe ndangumgwebi elizweni,+ ukuba wonke umntu onetyala okanye umgwebo eze kum! Ngokuqinisekileyo ke bendiya kumenzela okusesikweni.”+ 5 Kwakusithi kwakusondela umntu ukuze aqubude kuye, yena olule isandla sakhe ambambe+ aze amange. 6 Wenza into enjengale uAbhisalom kuwo onke amaSirayeli awayefika ukuze agwetyelwe kwakumkani; waza uAbhisalom wamana eziba iintliziyo zamadoda akwaSirayeli.+ 7 Kwathi ke ekupheleni kweminyaka engamashumi amane wathi uAbhisalom kukumkani: “Makhe ndihambe, ndiyacela, ndiye eHebron+ ndize ndifezekise isibhambathiso sam esinzulu endasenzayo kuYehova.+ 8 Kuba umkhonzi wakho wenza isibhambathiso esinzulu+ xa ndandihlala eGeshure+ eSiriya, esithi, ‘Ukuba uYehova nakanjani na angandibuyisela eYerusalem, ndimele nam ndinikele inkonzo kuYehova.’”+ 9 Ngoko ukumkani wathi kuye: “Hamba useluxolweni.”+ Wesuka ke yena waya eHebron. 10 Ke kaloku uAbhisalom wathumela iintlola+ kuzo zonke izizwe zakwaSirayeli, esithi: “Kamsinya nakuva isandi sesigodlo, nimele nithi, ‘UAbhisalom uye waba ngukumkani+ eHebron!’”+ 11 Ke kaloku kwakuhambe noAbhisalom amadoda angamakhulu amabini esuka eYerusalem, ebiziwe aza ahamba engarhaneli nto,+ yaye ayengazi nanye into. 12 Ngokubhekele phaya, xa wanikela imibingelelo, uAbhisalom wathumela wabiza uAhitofele+ umGilo,+ umcebisi kaDavide,+ esixekweni sakowabo iGilo.+ Kwaye laya lisomelela ngakumbi iyelenqe,+ nabantu baqhubeka besanda+ kuAbhisalom. 13 Ekuhambeni kwexesha kwafika ozisa udaba kuDavide, esithi: “Intliziyo+ yamadoda akwaSirayeli isemva kuka-Abhisalom.” 14 Kwaoko wathi uDavide kubo bonke abakhonzi bakhe ababenaye eYerusalem: “Sukumani, masibaleke simke;+ kuba akuyi kubakho kusinda kuthi ngenxa ka-Abhisalom! Hambani ngokukhawuleza, ngokoyikela ukuba usenokukhawuleza ukuze okunene asifumane aze asihlisele okubi nesixeko asixabele ngohlangothi lwekrele!”+ 15 Bathi abakhonzi bokumkani kukumkani: “Ngako konke oko inkosi yam ukumkani isenokukunyula, naba abakhonzi bakho.”+ 16 Ngoko ukumkani waphuma nendlu yakhe yonke ezinyaweni zakhe,+ waza ukumkani washiya abafazi abalishumi, amashweshwe,+ ukuba anyamekele indlu. 17 Waphuma ke ukumkani nabo bonke abantu ezinyaweni zakhe; bema eBhete-meraki. 18 Bonke abakhonzi bakhe bawela ecaleni kwakhe; kwaye onke amaKereti nawo onke amaPeleti+ nawo onke amaGati,+ amadoda angamakhulu amathandathu awayemlandela ukusuka eGati,+ awela phambi kobuso bukakumkani. 19 Wandula ke ukumkani wathi kuItayi+ umGati: “Kutheni na ukuba nawe uhambe nathi? Buya+ uze uhlale nokumkani; kuba wena ungowasemzini yaye, ngapha koko, ubhacile endaweni yakho. 20 Ufike izolo eli, ndikubhadulise+ na nathi namhlanje, uhambe xa ndisiya naphi na apho ndiya khona? Buya, ubuyise nabantakwenu, [yaye ngamana uYehova angakubonakalisela] ububele bothando+ nokukholoseka!”+ 21 Kodwa uItayi wamphendula ukumkani waza wathi: “Ephila nje uYehova nenkosi yam ukumkani iphila nje,+ kwindawo esenokuthi ibe kuyo inkosi yam ukumkani, nokuba kusekufeni nokuba kusebomini, uya kuba lapho umkhonzi wakho!”+ 22 Wathi ke uDavide kuItayi:+ “Hamba uze uwele.” Ngoko wawela uItayi umGati, nawo onke amadoda akhe nabantwana bakhe bonke ababenaye. 23 Bonke abantu belizwe babelila ngelizwi elikhulu,+ yaye bonke abantu babewela, nokumkani wayemi ngasentlanjeni yeKidron,+ kwaye bonke abantu babewela ngendlela evulekileyo eya entlango. 24 NoTsadoki+ wayelapha yaye bonke abaLevi+ babekunye naye bethwele+ ityeya+ yomnqophiso kaTHIXO oyinyaniso; yaye bayibeka phantsi ityeya yomnqophiso kaTHIXO oyinyaniso ngakuAbhiyatare+ bada bonke abantu bagqiba ukuwela besuka esixekweni. 25 Kodwa ukumkani wathi kuTsadoki: “Yibuyisele esixekweni ityeya+ kaTHIXO oyinyaniso.+ Ukuba ndithe ndakholeka emehlweni kaYehova, ngokuqinisekileyo uya kundibuyisa aze andibonise yona nendawo yayo yokuhlala.+ 26 Kodwa ukuba angathi, ‘Andiyoliswanga nguwe,’ ndim lo, makenze kum kanye njengoko kulungile emehlweni akhe.”+ 27 Waza ukumkani wahlabela mgama wathi kuTsadoki umbingeleli: “Wena uyimboni,+ akunjalo? Buyela esixekweni ngoxolo, kwanoAhimahatse unyana wakho noYonatan+ unyana ka-Abhiyatare, oonyana benu bobabini, kunye nani. 28 Khawubone, ndizilazila ngasemazibukweni asentlango kude kufike ilizwi elivela kuni lokundazisa.”+ 29 Ngako oko uTsadoki noAbhiyatare bayibuyisela ityeya kaTHIXO oyinyaniso eYerusalem, baza baqhubeka behlala apho. 30 UDavide wayenyuka eqhineni leMinquma,+ elila njengoko wayenyuka, egqubuthele intloko;+ kwaye wayehamba enganxibanga nto ezinyaweni, nabo bonke abantu ababenaye bagqubuthela elowo intloko yakhe, yaye benyuka belila ukunyuka kwabo.+ 31 Kwanikelwa ingxelo kuDavide, kwathiwa: “NoAhitofele uphakathi kwabo benza iyelenqe+ noAbhisalom.”+ Wathi ke uDavide:+ “Liguqulele ekubeni bubudenge,+ ndiyacela, Yehova,+ icebo lika-Ahitofele!” 32 Kwathi ke akufika uDavide eluchochoyini apho babedla ngokuqubuda khona abantu kuThixo, wayelapha uHushayi+ umArki+ emhlangabezile, umwunduzo wakhe ewukrazulile nasentloko enothuli.+ 33 Noko ke, uDavide wathi kuye: “Ukuba okunene uthe wawela nam, ngokuqinisekileyo ke ubuya kuba ngumthwalo kum.+ 34 Kodwa ukuba ubuyela esixekweni uze okunene uthi kuAbhisalom, ‘Ndingumkhonzi wakho, Kumkani. Ndandifudula ndingumkhonzi kayihlo, mna kanye ngelo xesha, kodwa ngoku mna kanye ndingumkhonzi wakho,’+ uze ke unditshitshisele+ icebo lika-Ahitofele. 35 Abanawe na apho uTsadoki noAbhiyatare ababingeleli?+ Kothi ke yonk’ into onokuthi uyive endlwini kakumkani uyixelele uTsadoki noAbhiyatare ababingeleli.+ 36 Khangela! Balapho kunye nabo oonyana babo bobabini, uAhimahatse+ kaTsadoki noYonatan+ oka-Abhiyatare; yaye ngabo nize nindithumelele yonk’ into eninokuthi niyive.” 37 Ngoko uHushayi, iqabane likaDavide,+ wangena esixekweni. Ke yena uAbhisalom,+ wangena eYerusalem.